Kurume 2021 - Peji 2
Nepo Google Pixel 4a 5G isiri kuzokunda chero makwikwi erunako, akanakisa Pixel 4a 5G makesi jazz kumusoro iyi inodhura 5G foni. Kuchengetedza mari yako kwakanyanya, asi ngatitorei chaizvo. Hupenyu hupfupi kwazvo kune dzinofinha kesi dzerunhare. Nekutenda, aya maPixel 4a 5G makesi haana kana chinhu asi uye anowedzera mapopu eruvara uye ekuwedzera kuchengetedzwa kuti foni yako iratidze nyowani nyowani. Keep… [Verenga zvakawanda ...] nezve Aya ndiwo akanakisa kesi echako nyowani Pixel 4a 5G!
Microsoft haisati yamboda kwazvo kuisa maprosesa azvino mumidziyo yavo, uye zvinoita kunge AMD-powered Surface Laptop 4 ichave mumwe muenzaniso. Benchmark yechigadzirwa chakatumirwa neAPISAK chinoratidza chishandiso chiri kupihwa simba neiyo processor ye AMD Ryzen 7 iyo yava neimwe nguva. Vamwe vanga vachitarisira iyo yazvino AMD Ryzen 5000 processor, yaive… [Verenga zvakawanda ...] nezve Surface Laptop 4 ingangove isingave ne AMD Ryzen 5000 processor, inoratidza chiratidzo
Microsoft iri kuronga yakanaka yekuona yekuvandudza ye Windows 10 muhafu yepiri yegore rino. Iyo inonzi "Sun Valley" yekuvandudza yatove mukuyedza nayo Windows 10 Vapindiri, uye iyo yazvino kuvaka inounza pamwe dzinoverengeka dzakagadziriswazve folda mifananidzo ichibva paFluent Dhizaini. Kana iwe uchida izvi zvidhori izvozvi iwe unogona zvirokwazvo kuve Insider, asi izvo hazvisi chaizvo… [Verenga zvakawanda ...] nezve Iyi nzira yekuwana Windows 10 Sun Valley mifananidzo ikozvino isina kuve Insider
« Enda ku Previous Page
Enda kune peji 4
Enda kune peji 89